Surfboard, Eps Foam Board, Stand Up Paddle Board - IPanda
IBhodi Ngesandla Esiqinile (EPS ibhodi)
Bona Buka Okuningi
Ezemidlalo Zangaphandle Bona okuthi Buka
Jinhua panda ongaphandle ezemidlalo, esungulwe ngo-2015, neqembu lochwepheshe njengoba okukhethekile omunye wabakhiqizi ngobukhulu ukuklama nokwakha ahlukahlukene ibhodi inflatable, sukuma gwedla ibhodi, skateboard, racing ibhodi, surf ukutakula ibhodi, fishingboard, iyoga ibhodi, izingane ibhodi, ibhodi lekite, i-surfboard, i-kayaks, njll.
Siphikelela ezimfanelweni zemikhiqizo futhi silawula ngokuqinile izinqubo ezikhiqizayo, ezibophezele ekwenziweni kwazo zonke izinhlobo.
Okufikayo Bona okuthi Buka
Siphikelela esimisweni se- "Ikhwalithi Yokuqala, Insizakalo Yokuqala, Ithemba Lokuqala" njengefilosofi yebhizinisi lethu.
Izinkuni Paper Sup
Amapharamitha womkhiqizo IBHODI ELIKHULU LE-CLASSIC WOOD LOKWENZA NGOBUHLE elinama-rails amnyama lenza leli bhodi libe ucezu lomsebenzi wobuciko ukukhombisa kubo bonke abangane nomndeni wakho. Ine-1 ungqimba wephepha lezinkuni ngaphakathi kwebhodi, futhi leli phepha lezinkuni linokuthungwa okuningi okuhlukile, ungakhetha okuhle kakhulu. Vikela igama: Izinkuni iphepha le-SUP Material: I-EPS foam core (26KG / CBM) + i-stringer yezinkuni + iphepha elilodwa lezinkuni + 3 ungqimba we-epoxy resin w / 6OZ indwangu ye-fiberglass ngaphezulu + 2 ungqimba we-Epoxy resin w / 6OZ indwangu ye-fiberglass ezansi + isicwebezelisi esiphakeme ...
indwangu yokuphrinta uphaphe lwe-SUP
Amapharamitha womkhiqizo Vikela igama: Indwangu yokuphrinta Izinto ze-SUP: Umgogodla we-EPS we-foam (26KG / CBM) + umucu wokhuni + 1 indwangu yokuphrinta ungqimba + 3 ungqimba we-Epoxy resin w / 6OZ indwangu ye-fiberglass ngaphezulu + 2 ungqimba we-Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth esiphethweni esiphansi + se-gloss epoxy. Usayizi: ngezifiso sukuma gwedla ibhodi, imvamisa kusuka ku-9'6 kuye ku-14'0. Idizayini: ubuso obenziwe ngokwezifiso be-epoxy fiberglass engu-1 ngaphezulu + kwendwangu yokuphrinta ubuso engu-1 ngezansi; ngezifiso 1 ubuso bamboo yokwakha yaseGrisi phezulu + 1 ubuso bokuphrinta indwangu ngezansi; Ilogo: ngokwezifiso ...
I-Epoxy Fiberglass Sup
Amapharamitha womkhiqizo Vikela igama: Epoxy fiberglass SUP Material: EPS foam core (26KG / CBM) + wood stringer + 3 layer of Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth on top + 2 layer of Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth on bottom + gloss high ukuphela kwe-epoxy. Usayizi: ngezifiso sukuma gwedla ibhodi, imvamisa kusuka ku-9'6 kuye ku-14'0. Idizayini: ngokwezifiso ubuso obubili be-epoxy fiberglass ngaphezulu nangaphansi. Ilogo: ngezifiso usilika screen LOGO. Isesekeli sokukhokhwa kwamahhala: 9ft plastic single middle fin + 2 fins side side fins on future / 9ft p ...
ICarbon Fibre Sup
I-Bamboo Veneer Sup
Amapharamitha womkhiqizo Vikela igama: I-bamboo veneer SUP Material: I-EPS foam core (26KG / CBM) + stringer yezinkuni + 1 ungqimba 0.5mm bamboo veneer + 3 layer of Epoxy resin w / 6OZ fiberglass cloth on top + 2 layer of Epoxy resin w / 6OZ indwangu ye-fiberglass phansi + ekugcineni okuphelele kwe-gloss epoxy. Usayizi: ngezifiso sukuma gwedla ibhodi, imvamisa kusuka ku-9'6 kuye ku-14'0. Idizayini: ngezifiso ubuso obunye bamboo + ubuso obunye be-epoxy fiberglass / ubuso obabili be-bamboo veneer ngaphezulu nangaphansi. Ilogo: ngezifiso usilika screen LOGO. Isesekeli sokukhokhwa kwamahhala: 9ft ...
Imikhiqizo Bona okuthi Buka
Imikhiqizo eyinhloko ibhodi elingenayo, phakama ibhodi lokugwedla, i-skateboard, ibhodi lokujaha, ibhodi lokutakula i-surf, ibhodi lokudoba, ibhodi le-yoga, ibhodi lezingane, ibhodi lekite, i-surfboard, i-kayaks, nazo zonke izinhlobo zezinsiza.
IJinhua Panda Outdoor Sports Co., Ltd.